Sidee udheer ujeeda shaqada?
Posted by Tranquillus | Juun 4, 2018 | Cilaaqaadka dadka dhexdooda
Waxaa jira kun iyo hal sababo aad uga xanaajinaysid shaqadaada.
Faylasha ku urursan miiskaaga, maamulahaaga yar fahamka ama qof isqabaa oo aan u muuqan inuu yahay dhaqan wanaagsan.
Halkan waxaa ku yaal fikrado ah ineynu ku faraxsanayn shaqada oo aad ku noolaato maalmo dagan oo xasiloon.
Dib u soo celi xaalada ka xanaaq badan:
Waxyaabaha muhiimka ahi ma ahan inaad ka careysiiso marka xaalad xun ay timaaddo.
Taas bedelkeeda, waa inaynu isku darsannaa oo nidhaahnaa xilligan xaadirka ah waa mid ku-meel-gaar ah iyo in saacado yar oo wax waliba ka fiicnaan doonaan.
Ilaalintu waxay naga dhigeysaa inaan lumino garashadeena, aan macquul aheyn in aan ka tarjunno si habboon u falceliso marka mid ka xanaaqo.
Sidaa daraadeed, wax yar ayaan ku qaadannaa waxa dhacaya, waxaanu is weydiinay dhowr daqiiqo si aan u yareyno cadaadiska.
Haddii aad haysato fursad aad ku shaqeyso xafiis gaar ah, waxaad awoodi doontaa inaad soo bandhigto muusikada adoon wax dhib ah u geysan saaxiibbadaa.
Haddii, si ka duwan, adiga ka shaqee meeshi furan, door bideyso dhageysiga madaxa.
Muusiggu wuxuu kuu ogolaanayaa inaad nasatid oo aad si fudud u nasatid si degdeg ah loo siiyo si aad u doorato muusikada nasashada.
Kama fekereyno waxa ku filan, laakiin waxaa la qaadayaa qaar ka mid ah muusikada muusikada, waa mucjiso ku salaysan niyadda.
Qaadashada xaalad maskaxeed oo wanaagsan waxay kuu oggolaaneysaa inaad si fiican u maareyso dareenka shaqada.
Sidaa darteed, baro inaad horumariso fikrado wanaagsan.
Marka ay xaaladdu ku xumaato, aad shaqeyneysid, ma garanaysid sida looga jawaabayo dhammaan emailadaada, dhammaan codsiyada, dhammaan xaaladaha degdega ah: sii fiican oo weydii sida loo hagaajinayo xaaladda? Inta badan degdegga ma aha mid!
READ Sirdoonka shucuurta ee shaqada
Ka fogow cabitaanada xiisaha leh:
Caffeine waxaa lagu yaqaanaa saameyn firfircoon, laakiin ma aha waxa ugu fiican ee dareemayaasha.
Waxay kaa ilaalinaysaa inaad kor u qaaddo oo kordhiso waxtarkaaga, waxay kaloo soo saartaa adrenaline waxayna kordhisaa dareenka walaaca.
Isku day inaad naftaada ka sameyso kafeyn iyo kafeyn, cab cabitaan dhexdhexaad ah oo aad dooratid cabitaano aan kaadi haysan.
Hurdada, fure u noqoshada degitaanka shaqada:
Hurdad la'aanta badanaa waa sababta keentay xanaaq badan.
Tani waa sababta aadan u seexan hurdada, sababtoo ah hurdo kugu filan waxay kaa ilaalineysaa inaad xanaaqdo oo aad fikradahaaga u dhiibto.
Sidee udheer ujeeda shaqada? Sebtembar 15th, 2018Tranquillus
socdaWaa maxay sababta ay u shaqeyneyso Faransiiska?
Sidee si guul leh loogu dhex gali karaa koox cusub?
Sidee loo maareeyaa qof saaxiib ah oo leh fikrad xun?
Hagaajinta Isgaarsiinta Xirfadahaaga Shaqada